Garda ရေကန်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ခရီးသွားသတင်း
ရေကန်များသည်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီများတွင်အားလပ်ရက်ခရီးသွားနေရာများဖြစ်ပြီးအီတလီနိုင်ငံတွင်အလှဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် Garda ရေကန်, ကြီးမား, ခမ်းနားခြင်းနှင့်အလွန် touristy ။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းပေးတဲ့အဲလ်ပ်တောင်တန်းခြေရင်းနားမှာဘာလို့လဲ။
ကန်သည်နိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်တွင်ရှိသည် Verona ကနေ 25 ကီလိုမီတာTrentino - Alto Adige, Verona နှင့် Lombardy စသည့်အီတလီဒေသသုံးခုတွင်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ကျွန်းအချို့ရှိသည် နှင့်မြောက်မြားစွာသောမြို့ကြီးများနှင့်မြို့ကြီးများ၎င်း၏ကမ်းခြေပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီ။ ပို့စကတ်သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ရေခဲမြစ်ရေကန် အရာအတိတ်အတိတ်ရေခဲခေတ်ရဲ့အဆုံးမှာဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ofရိယာတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသည် 368 စတုရန်းကီလိုမီတာ ၎င်းသည် ၅၂ ကီလိုမီတာရှည်လျားသည်။ ကျွန်းငယ် ၈ ခု၊ Stella နှင့် Altare ကျွန်းများ၊ Garda ကျွန်း၊ San Biagio၊ Coniglio ကျွန်း၊ Trimelone နှင့် Olivo နှင့် Val idi Sogno ကျွန်းများရှိသည်။
Mincio မြစ်မှမြစ်တစ်စင်းသာမွေးဖွားခဲ့သော်လည်းမြစ်နှင့်မြစ်များစွာသည်မြစ်လက်တက်များရှိသည်။ အဆိုပါရှုခင်းအံ့သြဖွယ်သည်နှင့်၎င်း၏မှကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ် မြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတုမွန်းလွဲပိုင်းတွင်မကြာခဏလေနှင့်ဇူလိုင်လအလယ်ပိုင်းတွင်အပူချိန် ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ရှိသည်။ ရေကန် Garda တွင်အကောင်းဆုံးနေရာများမှာအဘယ်နည်း? ကောင်းပြီ, ငါတို့ Sirmione, Desenzano, Peschiera del Garda, Gardone Riviera နှင့် Brescia အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သွားကြသည်။
Brescia ၎င်းသည်ကန်နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပြီးသမိုင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၎င်းသည်အာရုံစူးစိုက်မှုကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောခရီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် ရောမကနေအလယ်ခေတ်သမိုင်းအထိ။ ၎င်းသည်လူများစွာနေထိုင်သော Lombard မြို့ဖြစ်သည်။ ရှေးအကျဆုံးအပိုင်းမှာရောမဖိုရမ်နှင့် Santa Giulia ၏ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်းသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများစွာ၊ ပြတိုက်များနှင့်အရေးကြီးအနုပညာရှင်များ၊ ရင်ပြင်များ၊ နန်းတော်များဖြင့်လှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Garda ရေကန်ပေါ်ရှိ Brescia ကမ်းရိုးတန်းသည် Salt၊ Riviera Gardone နှင့် Malcesine ဆီသို့စိတ်ရှည်စွာလမ်းလျှောက်ရန်သွားသည့်လမ်းဖြစ်သည်။ Monte Baldo။ ထိုအရပ်မှကြည့်ရှုလိုက်ခြင်း! တောင်သည် ၁၈၀၀ မီတာမြင့်သည်။ နွေရာသီတွင်တောင်တက်သမားများသည်လမ်းကြောင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်ဆောင်းရာသီတွင်နှင်းလျှောစီးနေသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုကတည်းက Riviera Gardone ဒါဟာတ ဦး တည်းကြောင်းပြောရပါမည် ကန်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအပန်းဖြေစခန်း နှင့်များစွာသောရှိပါတယ် ပန်းခြံများနှင့်လှပသောဥယျာဉ်များဖြစ်သည်s ။ နွေရာသီတွင်ဂီတနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များစွာပြုလုပ်သောကြောင့်မျက်စိနှင့်နားကိုနှစ်သက်သည်။ အကောင်းဆုံးအိမ်များထဲမှတစ်ခုမှာကဗျာဆရာ Gabriele d'Annunzio ဖြစ်သည်။ ယခုအခါပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် Hruska ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ကိုကမ္ဘာတစ်ခွင်ရှိအပင်များနှင့်ရေကန်များနှင့်ကျောက်တုံးများကြားတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Peschiera del Garda ၎င်းသည်လူကြိုက်များပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောနေရာလည်းဖြစ်သည်။ အားလပ်ရက်အနားယူရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ကာ ကမ်းခြေ အိုင်နှင့်တစ် ဦး ကျော် စက်ဘီးလမ်းကြောင်း Mincio မြစ်ကမ်းနားတလျှောက်စီးဝင်ပြီးအလယ်ခေတ်နံရံများကိုဖြတ်သန်းသွားသောနန်းတော်များ၊ စစ်တပ်ဆောက်လုပ်ရေးဟောင်းများ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်သန့်ရှင်းရာဌာနများကဲ့သို့သော Frassino ၏အပျိုကညာ၏ Sanctuary.
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းရှိပါတယ် Desenzanoသေးငယ်ပြီးပိုမိုစုစည်းထားသည့်နေရာ Plaza Malvezzi နှင့်ဆိပ်ကမ်းဟောင်းဝန်းကျင်၌ကျွန်ုပ်တို့ချည်နှောင်ထားသည်။ ဒီမှာ ၁၅ ရာစုနန်းတော်တွေရှိတယ်၊ ဒေသခံဗိသုကာ Todeschini ရဲ့လှပတဲ့နန်းလည်းရှိတယ် XNUMX ရာစုကနေရောမ villa ၏အပျက်အယွင်း ရောင်စုံပန်းချီကားများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်နှင့်အတူ။ သို့မဟုတ်ထိပ်၏ထိပ်မှအချို့သောကြီးစွာသောမြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ San Martino della Battaglia ၏မျှော်စင်.
နောက်ဆုံးတော့ ဆာမီDesenzano မှမိနစ် ၂၀ သာဝေးသောကျဉ်းမြောင်းသောကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင်အိုင်ထဲသို့ ၄ ကီလိုမီတာအထိထွက်သွားသည်။ တစ်ချိန်ကကဗျာဆရာ Catullus သည်ထိုတွင်နေထိုင်ခဲ့ရာထိုကြောင့်ဟုလူသိများသောနေရာတစ်ခုရှိသည် Catullus ၏ Grotto သော villa အတွက်အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဤဒေသတွင်ရောမအင်ပါယာ၏ကဗျာဆရာတည်ရှိရာနေအိမ်အကျယ်အ ၀ န်းသည်ယခုတိုင်ကျန်နေဆဲဖြစ်သည်။ အပျက်အယွင်းများသည်ဘီစီ ၁ ရာစုအကုန်မှအေဒီ ၁ ရာစုအစမှစတင်ကာကျွန်းဆွယ်၏အဆုံးတွင်မြေမျက်နှာပြင်များအောက်တွင်အဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။
ဒီမှာန်းကျင်နောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ် ရေပူစမ်း ထိုရေကန်၏အောက်ခြေမှစီးဆင်းပြီးမြောက်မြားစွာသောများ၏စစ်ဆင်ရေးခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ Spa မ်ား အရာများအတွက်ရွာလူသိများသည်။ Virgilio နှင့် Catullo နှစ်ခုရှိပြီး Aquaria ဟုခေါ်သည်။
သင်လည်းသိနိုင်သည် Rocca scagliera၎င်း၏မျှော်စင်နှင့်နံရံများနှင့်အတူငြိမ်သက်ရပ်တည်သောကာကွယ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံ။ The Sirmione ရဲတိုက် ၎င်းသည်ရေဖြင့် ၀ န်းရံထားသောလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးယနေ့ခေတ်တွင်အများပြည်သူအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအထူးခိုင်ခံ့သောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးသင်ကြိုက်လျှင် အပန်းဖြေပန်းခြံများ ပထမဆုံးသောပန်းခြံများကိုအီတလီနိုင်ငံ၊ ဥရောပရှိအကြီးမားဆုံးပန်းခြံတစ်ခုသို့အမြဲတမ်းသွားရောက်နိုင်သည် Gardaland ပန်းခြံ, အိုင်၏အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းတွင်။
ကံကြမ္မာကိုရိုသေလေးစားမှုဖြင့်၎င်း၊ Garda ရေကန်က၎င်း၏မှကမ်းလှမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများ ဧည့်သည်? ကောင်းပြီ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသမိုင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း ကျော်လွန်၍ သင်အချို့လေ့ကျင့်နိုင်သည် ရေတံခွန် ရွက်လွှင့်ခြင်း၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနေ့လည်ခင်းတိုင်းလေပြင်းများ (Ora နှင့်Pelér) တို့သည်အိုင်၏ရေကို ၀ င်ရောက်စီးဆင်းစေသည် ရွက်လွှင့်ခြင်း နှင့်အရည်အသွေးဖြစ်ရပ်များ၏အဖွဲ့အစည်း။ ကန်၏မြောက်ဘက်ကမ်းတွင်လေ့ကျင့်သူများ လေလှိုင်းစီး သို့မဟုတ်ဤအားကစားအကြောင်းကိုလေ့လာချင်သောသူတို့အား။
သမိုင်း၊ ဗိသုကာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစားနှင့်အီတလီအကြောင်းပြောသည့်အခါတိုင်း၊ gastronomy။ Garda ရေကန်၏ခဲဖွယ်စားဖွယ်များကဘာတွေလဲ။ အခြေခံအားဖြင့် ဝိုင်၊ အပျိုစင်သံလွင်ဆီ၊။ ဒီမှာဝိုင်ဝိုင်တွေဟာအလွန်ကျော်ကြားပြီး Merlot၊ Cabernet, Nosiola (သို့) Groppello စပျစ်ဥယျာဉ်တွေမှာလုပ်ကြတယ်။ နှင့်အကောင်းဆုံးအလွန်ကောင်းသောဒေသခံ Lemon နှင့်အတူ lemongrass ။ ဝိုင်များတွင်မူရင်းအဖြူ၊ အနီရောင်နှင့်နှင်းဆီပန်းများရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီကမ်းခြေပေါ်တစ်ခုတည်းသောနေရာများမဟုတ် Garda ရေကန် ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူကြိုက်အများဆုံးတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အီတလီနိုင်ငံရဲ့ဒီလှပတဲ့နေရာမှာသင်ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းအရသာတစ်ခုပေးပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » italia » ရေကန် Garda အပေါ်ခရီးသွားလုပ်ငန်း